Buraannews.com » Deg deg:Banaabaxyo waa weyn oo kasocda Garoowe”Boosaaso Laguna Tageeraayo…
Dhageyso: Banaanbax lagu taageerayo Jubbaland oo ka dhacay Dhadhaab. Dhageyso madaxweyne ku xigeenka Puntland oo kulan ku aadan adkeynta amniga la qaatay waxgaradka gobolka Bari Nabad sugida oo dalbatay in aan laga been abuuran. 2-qof oo Shabaab lagu eedeyay oo Kenya lagu dilay Al-shabaab “Kismaayo dagaal ay fooda u saran tahay”. SOMALI LINKS
Deg deg:Banaabaxyo waa weyn oo kasocda Garoowe”Boosaaso Laguna Tageeraayo…
September 10, 2012 - Written by reporter2 - Edited byreporter2 Sida noo xaqiijiyeen Goob jogayaal kusugan magaalooyinka Gaaroowe iyo Boosaaso ayaa shegaya in Goor dhow bilowdayn Banaabaxyo waa weyn kuwaasi oo lagu tageeraayo Doorashada kasocota Magaalada Muqdisho.
Dadkaan oo u badan haween iyo Caruur ayaa ruxaayo calanka soomaaliya iyo kan Maamulka Puntland waxaana ay kudhawaqaan in ay tahe guul iyo farxad aan la ilaawi karin Doorashada Tariiqiga oo kasocota Muqdisho.
Dadweynahaan ayaa dibadbaxa ayaa kutaageereyn cidna waxaana muujinayaan sida ugu faraxsanyin in doorasho kdhacdo magaalada Muqdisho mudo 42 Sano.
Isk sowada duub Shacabka Puntland iyo Maamulka Halkaasi ka arimiya aaya ku kala fekrad duwan doorashada wadanak soomaaliya akdhaceyso